Bugsnag: Yechokwadi-Nguva Bug Kuzivisa | Martech Zone
Chimwezve chikonzero nei tichida kuitisa WordPress pa Flywheel ndiko kuwana nyore nyore kwePP matanda kuti utipe ruzivo rwezvikanganiso mumitambo yevatengi vedu uye mapulagini atiri kusimukira mairi.Nepo izvi zvakanaka mukusimudzira kweWordPress, vazhinji varidzi havape nyore kuwana kune log mafaira uye zvikanganiso pane kumwe kuitisa mapuratifomu.
Bugsnag ipuratifomu yakakura yeSawaS inozvionera otomatiki tsaona mumaapps ako akagadzirwa muRuby, Python, PHP, Java, Android, iOS, Node.js kana Kubatana (kusanganisira Android neIOS).
Notifications - Nyore kudzora kana iwe ukaudzwa nezvezvakasiyana: pane yekutanga kuitika, nguva dzese kana kunyangwe kuwanda kusingawanzoitika muchiitiko. Tora ziviso kuburikidza neemail, Campfire, HipChat, GitHub Issues, Pivotal Tracker, JIRA, Web Hooks uye nezvimwe…
kutsvaka - Sefa kuburikidza nezvikanganiso zvekushandisa zvako nyore uchishandisa yakazara-zvinyorwa kutsvaga. Bugsnag inokutendera kuti utsvage nemhando yekukanganisa, yekukanganisa meseji uye kunyangwe nzvimbo yekanganiso.
Real-time tracking - nekukurumidza nzwisisa kuti vangani vashandisi vako vanokanganiswa neakasarudzika kuti iwe ugone kuona nekugadzirisa matambudziko akakosha kutanga. Bugsnag inokupa iwe akawanda maonero pane ako anouya kunze, ona zvese zvisaririra zvioneke munguva chaiyo-nguva, kana tarisa zvakakamurwa nerudzi.
anosiyiwa - Needu kunze kwekugadzirisa uye kuendesa maratidziro maficha, iwe unogona kuve nechokwadi kuti uri kutarisa pazvinhu zvakakosha zvakanyanya mune yako application. Kuva nezvakasiyana zvako pasi pekutonga hazvina kumbonzwa zvakanaka kwazvo.
Zviratidzo zvehungwaru - kukuratidza kana paine mhando nyowani yekusarudzika kana kana imwe yakasarudzika iine kujairika kwechiitiko. Pakarepo ona kangani kese kusarudzika kwakaitika, vangani vashandisi vakavhiringidzwa uye tarisa kuti ndedzipi shanduro dzekushandisa kwako dzakasangana nedambudziko.
Kunze kwekuita mapoka - Zvikanganiso zvakarongedzwa nenzira yehungwaru, zvichikubatsira kucheka ruzha uye kuona matambudziko chaiwo. Yedu yemamiriro-anoziva plugins anonzwisisa chaizvo zvaiitika muapp yako pakaitika zvakasarudzika. Usambofa wakafashukirwa neakafanana maemail zvakare.
Bugsnag inogona kuiswa kune yako saiti kuburikidza Chikamu.io zvakare - kuverengera yako saiti kukurumidza haina kukanganiswa.
Tags: AndroidAndroid madhiragitsikidzikubata bugbug yekuteverabugsnagiosbugsJavaJava bugsNode.jsnode.js bugsPHPphp tsikidziPythonpython bugsrairiRubyruby bugsruby panjanjikubatanakubatana bugs
Jul 29, 2013 pa 7: 23 AM
izvi zvainyatsodzidzisa - kwete kufanana nezvakawanda zvandinoona online. kugovana 🙂